Nekuti yedu Mutengo we ESLyakasiyana zvakanyanya nezvigadzirwa zvevamwe, hatisiye zvese zvigadzirwa pane yedu webhusaiti kuti tirege kuteedzerwa. Ndapota taura nevashandi vedu vekutengesa uye ivo vachakutumira iwe ruzivo rwakadzama.
Mashandiro eESL anoshanda sei?
Yakazara ESL tag system ine zvikamu zvina: iyo huru komputa PC, EPD skrini, ESL tag uye smart handheld terminal midziyo.
ESL tag Kutanga, ruzivo rwezvinhu mudhatabhesi rwunosimbwa nekombuta yekutambira kuburikidza ne ESL tagsoftware yekushandisa, uyezve mutengo uye rumwe ruzivo runoda kuvandudzwa rwunotumirwa kunonakidza kuburikidza neEthernet (kana serial port port); iyo inonakidza inotyaira chiuno kanyanga kurodha Iyo RF redhiyo chiratidzo ine chigadzirwa data ruzivo inotumirwa kuchitoro chese.
Iyo ESL tag system ine maviri ekutaurirana mabasa: kunongedza-kunongedzera uye kutumira boka, ndokuti: iyo inomiririra komputa inogona kuendesa dhata kune yakatsanangurwa ESL tag, kana zvese ESL ma tag kamwechete Tora kutonga. ESL tag actually zvinobudirira kuisa sherefu muchirongwa checomputer, kubvisa iyo mamiriro ekuchinja manyore mutengo, uye kuzadzikiswa kwemutengo pakati perejista yemari nesherufu.
Imwe neimwe ESL tag inochengeta zvidimbu zvemashoko pamusoro pechigadzirwa chinoenderana, uye mutengesi anogona kuongorora nekutarisa nerubatsiro rwe smart handheld terminal michina.
Nei Uchisarudza ESL mutengo tag?
1. Mutengo we ESL yakavimbika kwazvo
Operation manejimendi otomatiki, otomatiki kuongorora uye epakutanga yambiro mashandiro, akanakisa emagetsi mapepa ekuratidzira mashandiro, encrypted dhata yekufambisa, hupenyu hwebhatiri kweanopfuura makore mashanu
2.Mutengo we ESL iri nyore kwazvo
Imwe-tinya mutengo shanduko, iri kure system software kusimudzira, ESL otomatiki kutenderera-robin mashini, otomatiki kutangazve mushure mekundikana kwesimba, yakapusa kuisirwa uye nyore kushanda
3. Mutengo we ESL oparesheni inochinja
Tsigira yakawanda-skrini kutendeuka, yakasarudzika tsika yemutengo tag template, sangana nemitauro yakawanda nharaunda, inowirirana neakawanda maseru mapuratifomu, akapfuma zvishongedzo, kujairana kune akawanda mamiriro
Mukushandisa kunoshanda: Mutengo we ESLinoita basa rekufambiswa kwemashoko uye wekudyidzana anotakura muchitoro, kutaurirana nevatengi, vabatsiri vezvitoro, uye dzimbahwe mune zviyero zvakawandisa kuvandudza ruzivo rwevatengi, kukwidziridzira kufambiswa kwebasa, uye kuona kushanda kwepakati pamwe nekuchengetedza manejimendi. Zvitoro zvinogona zvakare kubatanidza pamhepo uye isingaenderane kuburikidza neMutengo we ESL, inogonesa zvitoro zvepanyama kugadzira, kuunganidza, kuongorora uye kushandisa data rehunhu hwevatengi, uye nekupa hwaro hwedata kune vatengesi kuti vawane kushambadza kwakanyatsojeka. Zvichienzaniswa nenzira dzechinyakare dzekushambadzira dzakadai sekuparadzaniswa kwepamhepo uye pasiri pamhepo, nzira imwe chete, voga vanobatana, vasingazivikanwe zviripo zviwanikwa, uye kunetsekana mukutarisa kwekupedzisira kushambadzira mhedzisiro, kushambadzira kwakaringana kunogona kuwanikwa zviri nyore kuburikidza nekushandisa kwakabatana kwesherefu bar bar uyeMutengo we ESL. Uye iyo nzira yese inoteedzerwa, chaiyo-nguva kutonga, kukwidziridza kushambadzira.
Saizi 45mm (V) * 89mm (H) * 13.5mm (D)
Ratidza ruvara Dema, chena, yero
Kugadziriswa 296 (H) × 128 (V)
Ratidza Shoko / Mufananidzo
Inoshanda tembiricha 0 ~ 50 ℃
Kuchengetedza tembiricha -10 ~ 60 ℃
Hupenyu hwebhatiri Makore mashanu
Tine zvakawanda ESL mutengo ma tag kuti iwe usarudze kubva, panogara paine chinokodzera iwe! Iye zvino unogona kusiya ruzivo rwako rwakakosha kuburikidza nebhokisi rebhokisi mukona yezasi yekurudyi, uye isu tinosangana newe mukati maawa makumi maviri nemana.
MRB ESL mutengo tag HL290 vhidhiyo
Pashure: MRB yemagetsi mutengo tag HL213F yechikafu chakaomeswa
Zvadaro: MRB e inki mutengo HL420
E Ink Mutengo Tag